शिक्षा स्वास्थ – Page5– GoodNews24
यात्रामा बान्ता आउँछ ? त्यसोभए यस्तो गर्नुहोस् – GoodNews24
यात्राको क्रममा टाउको दुख्ने, बान्ता हुने ,थकित हुने इत्यादि समस्याहरूको सामना गर्नु पर्ने व्यक्तिहरूका लागि रमाइलो यात्रा भनेको कल्पना मात्र हो। यो समस्या जुन यात्राको क्रममा हुन्छ यसलाई मोशन सिकनेस भनिन्छ। धेरै व्यक्तिलाई कार वा बस यात्रामा बान्ता टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ,धेरै मानिसहरू कार वा रोटे पिङ्ग खेल्दा र हवाई यात्राको क्रममा समेत यसको शिकार हुन्छन्। यस समस्याको समाधानका लागि …
चिया प्राय मानिसहरुको मन पर्ने पेय पदार्थ हो । अझ कतिपयको त छोड्नै नसक्ने चियाको लत लागेको हुन्छ । यहाँ कम नै होलान जो चिया पिउदैनन । बिशेस गरि जाडोमा चिया अनिवार्य जस्तै नै हुन्छ । दिनको सुरुवात चियाबाट ,पाहुनालाई स्वागत चियाले नै ,साथी भाइ भेट्दा चिया गफ – यो हाम्रो संस्कार जस्तै नै बनेको छ । आज संसारमा सबैभन्दा …
काठमाडाैँ । युवामा देशभक्तिको भावना जगाउँदै सकारात्मक सोच विकास गर्न टोखास्थित न्हुजः खलः (नयाँ किरण समूह)को ‘बन्दै छ मेरो देश, सहभागिता मेरो पनि’ भन्ने मूलभावमा राष्ट्रिय यूवा कविता प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछ । गर्ने र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’मा विश्वास गर्ने देशभरका युवरुलाई आफ्ना भावना शब्दहरुमा उनेर कविता सम्प्रेषित गराउन उक्त आयोजना गरिएको हो । आगामी फागुन ११ गते हुने प्रतियोगितामा …
बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री प्रदान -GoodNews24
रामपुर । नेपाल पुस्तक तथा शैक्षिक व्यवसायी महासङ्घ, पाल्पा शाखाले फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई शैक्षिकका सामग्री प्रदान गरेको छ । बिहीबार पुस्तक दिवसको अवसरमा शाखाले सिबिआरको केयर सेन्टरमा रहेका १२ जना फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई रु १५ हजार बराबरको शैक्षिकका सामग्री सहयोग गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष किशोर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । शारीरिकरुपमा तथा मानसिकरुपमा अपाङ्गता भएका छ बाmबालिकाबाट शुरुआत भएको सेन्टरमा …
हाङझाउ । अलिबाबा समूहका संस्थापक ज्याक माले खोलेको ज्याक मा फाउन्डेसनले कोरोना भाइरसको खोप निर्माणका लागि १ करोड ४४ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यो रकम कोरोना भाइरसको खोपको अनुसन्धान र निर्माणमा खर्च गरिने फाउन्डेसनले जनाएको छ । फाउन्डेसनका संस्थापक ज्याक मा ले खोप निर्माण गरी ठूलो संख्यामा बितरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहे पनि फाउन्डेसनले मानवीय सहयोग …
चाैतारा । चीनमा फैलिएको नोवल कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन उत्तरी नाको तातोपानीमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ । भोटेकोशी गाउँपालिकासँग समन्वय गरी स्थानीयवासीमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले प्रचारप्रसार गर्नुका साथै हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले जानकारी दिनुभयो । डेस्कमा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको र कोरोना भाइरसको लक्ष्यण देखिएमा बिरामीलाई तत्काल काठमाडौ अस्पतालमा पठाइने व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला …
चितवन । उत्तरी छिमेकी चीनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेपछि नेपालीहरुमा पनि त्रास थपिएको छ तर चिकित्सकहरुले उच्च सावधानी अपनाउन सुझाव दिँदै आत्तिई हाल्नुनपर्ने जनाएका छन् । रुघाखोकीबाट शुरु हुने धेरै रोग चितवनमा देखिने गरेको पाइएको छ । यही जिल्लाको सरकारी भरतपुर अस्पतालमा वरिष्ठ फिजिसियनका रुपमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का उपाध्यक्ष डा भोजराज अधिकारी समयमै उच्च सतर्कता अपनाउन सकेमा सङ्क्रमणबाट …
सम्मान त्यस्तो चिज हो जो हरेक व्यक्तिले चाहन्छन । अरुबाट अपमानित हुन कसैलाई पनि मन पर्दैन । अरुबाट सम्मान पाउनु पहिले त उनीहरुको मन जित्नुपर्छ र आफुले पनि सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ । सम्मान लिनु दिनु त्यति सहज छैन तर सम्मानको लागि हामीले कुनै ठूलै काम गर्नुपर्छ वा ठूलो सफलता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन । अरुबाट सम्मान पाउन चाहनेले …
काठमाडौँ । काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क दिवा खाजा खुवाउने भएको छ । ‘मेयर दिवा खाजा कार्यक्रम’ अन्तर्गत बाल विकासदेखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क दिवा खाजा खुवाउन लागिएको हो । नगरपालिकाभित्रका झोर महाँकाल, बौडेश्वर, चण्डेश्वरी, धापासी, तिलिङ्गाटार, जालपा र मनोहर माविका विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन लागिएको हो । आठ सरकारी विद्यालयमा हाल चार हजार ३०६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् …
आन्टि चिया बन्छ ?? “बन्छ नि बाबु कति ओटा बनाउने हो र ? ” एउटा बनाउनुस न Black tea ! “ए हस बस्दै गर्नुस है त ” हस…अनि सुन्नुस न एउटा चुरोट पनि दिनुस है , “हामी चुरोट बेच्दैनौ नि बाबु, तिमी जस्तै जवान केटाहरु सबै मेरै छोरा जस्तै हुन ! म मेरा छोराहरु कुलत मा फसेको कसरी हेर्न सक्छु …
कोभिड-१९ का कारण स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति-Goodnews24
२१ आश्विन २०७७, बुधबार १२:३३
१५ भाद्र २०७७, सोमबार १५:१८
कोभिड–१९ बारे जानकारी दिन मिडिया सेन्टर स्थापना – GoodNews24
११ चैत्र २०७६, मंगलवार २३:०१
२९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ११:५७